vaccine(vaccine) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
चिनियाँ अनुदानको ८ लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो
काठमाण्डौ । चीनले अनुदानमा दिएकोमध्ये ८ लाख डोज खोप मंगलबार काठमाण्डौ आइपुगेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको विमानले ८ लाख डोज खोप त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गत हप्ता भएको कुराकानीमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेका थिए। सोहीमध्येको ८ लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको...
संक्रमणमुक्त भएकाहरुमा भ्याक्सिनको एक डोज नै पर्याप्त, यस्ता छन् वैज्ञानिक कारण
काठमाण्डौ । सम्पूर्ण विश्वले भ्याक्सिनको कमीको सामना गरिरहनुपरेको यो कठिन समयमा भ्याक्सिनको सिंगल डोजबाटै कोरोनाबाट सुरक्षित रहन सकिने खबरले बाहिरिँदा कस्तो होला ? पक्कै पनि सबैको ध्यान यसतर्फ तान्निछ। यस्तो नै चाखलाग्दो खबर छिमेकी देश भारतको उत्तर प्रदेशबाट आएको छ। उत्तर प्रदेशको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयू) को...
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएपछि यी लक्षण देखिएमा हुन सक्छ खतरा, सतर्क रहनुहोस्
काठमाण्डौ । बेलायतको एस्ट्रोजेनेका–अक्सफोर्डको भ्याक्सिनबाट ब्लड क्लट्स (रगत जम्ने समस्या) को साइड इफेक्ट देखियो। भारतको कोभिशिल्ड भ्याक्सिनबाट यस्तै साइड इफेक्ट देखिएको केही घटनाहरु सार्वजनिक भए। यस किसिमको साइड इफेक्ट देखिएपछि भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा खोप लगाउनेहरुका लागि साइड इफेक्टका लागि नयाँ...
ललितपुर र भक्तपुरका यी ठाउँमा चिनियाँ खोपको दोस्रो डोज लगाइने (सूचीसहित)
काठमाण्डौ । ललितपुर र भक्तपुर नगरक्षेत्रभित्र जेठ ६ गतेदेखि भेरोसेलको दोस्रो डोज खोप लगाउन सुरु गरिने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न वडाभित्रका २९ ठाउँमा खोप केन्द्र सञ्चालन गरिने जनाएको छ। पहिलो खोप लगाएकाहरुले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा गएर खोप लगाउन सक्ने महानगरले जनाएको छ। यसका लागि पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूले खोप कार्ड...
आजदेखि चिनियाँ खोप लगाइँदै, क–कसले कहाँबाट पाउनेछन् ?
काठमाण्डौ । चीनले अनुदानमा दिएको कोरोनाविरुद्धको खोप आज बुधबारदेखि लगाउन सुरु गरिने भएको छ। यो खोप चीनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, चीनमा अध्ययनमा जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थी, हिमालय पार व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारी, अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने कर्मचारी÷व्यक्ति, होटल, ट्रेकिङ, विज्ञापन र इन्टरनेट क्षेत्रमा काम...
आउँदो वैशाख ७-११ गतेसम्म कोरोनाविरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा लगाइने (सूचीसहित)
काठमाण्डौ । सरकारले कोरोनाविरुद्ध खोपको दोस्रो मात्रा आउँदो वैशाख ७ गतेदेखि वैशाख ११ गते लगाउने भएको छ। प्रथम चरणमा पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताका लागि लक्षित समूहलाई सरकारले दोस्रो मात्रा लगाउने मिति तय गरेको हो। जसअनुसार गत माघ १४ गतेदेखि फागुन १० गतेसम्म पहिलो मात्रा लगाएकाहरुलाई सरकारले दोस्रो मात्रा लगाउने व्यवस्था गर्न लागेको...
चीनले अनुदानमा दिएको कोभिडविरुद्धको खोप काठमाण्डौ आइपुग्यो
काठमाण्डौ। चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सोमबार बिहान काठमाण्डौ आइपुगेको छ। चीन सरकारले कोभिडविरुद्धको ‘भेरासेल’ खोपको ८ लाख डोज नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो। सोही खोप नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाजबाट काठमाण्डौ ल्याइएको हो। खोप लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज हिजो अपराह्न चीनको राजधानी बेइजिङ...
भारतद्वारा कोरोनाविरुद्धको खोप निर्यातमा रोक, नेपालसहित १९० देश प्रभावित हुने
काठमाण्डौ । भारतले अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेका खोपको सबै निर्यातहरूमाथि अस्थायी रोक लगाएको छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेकाले आउँदा साताहरूमा घरेलु माग बढ्ने र खोप भारतमै आवश्यक पर्ने विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका हुन्। भारतको यो कदमले अप्रिलको अन्त्यसम्म आपूर्तिमा असर गर्ने ठानिएको छ। यसले कोभ्याक्स ...
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरवासीका लागि कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप लगाउन खोप केन्द्रहरु तोकिएको छ। काठमाण्डौ महानगरपालिकाले वडाअनुसार खोप केन्द्र तोकेको हो। यही फागुन २३ देखि चैत १५ गतेसम्म ५५ वर्षभन्दा माथि उमेरका ज्येष्ठ नागरिक, महाविद्यालयका प्राध्यापकहरु, सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु र सार्वजनियक...
काठमाण्डौ । सरकारले भारतसँग किनेको कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप आज आइतबार काठमाण्डौ ल्याइँदैछ। स्वास्थ्य मन्त्रालय कोभिशिल्ड खोपको पहिलो लटमा १० लाख डोज आज दिउँसो काठमाण्डौ ल्याइँदैछ। सरकारले भारतसँग २० लाख डोज खोप किनेको छ । पहिलो लटको खोप एयर इन्डियाको विमानबाट दिउँसो १ः३० मा नयाँदिल्लीबाट काठमाण्डौ ल्याइने मन्त्रालयले...
काठमाण्डौ । विश्वव्यापी महामारीले थलिएको अवस्थामा कोरोनाभाइरसको खोप सबैतिर चासो र माग भइरहेको छ। सबै देशले पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा बिरामीलाई खोप लगाउन थालेका छन्। तर, आमनगरिकाले कहिलेसम्म पाउने भन्ने विषय भने अन्यौल नै छ। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाका...
सरकारले भारतलाई अग्रिम भुक्तानी दिएर कोभिडविरुद्धको खोप किन्ने
काठमाण्डौ । सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप खरिदमा अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। बैठकले कोभिसिल्ड भाक्सिन खरिद गर्न भारतको सिरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले सिरमसँग २० लाख डोज भ्याक्सिन खरिद गर्न लागेको छ। जसका लागि सरकारले...
कोभिडविरुद्ध खोप खरिद गर्न नेपाललाई विश्व बैंकले रु. ८.७० अर्ब सहुलियत ऋण दिने
काठमाण्डौ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद गर्न विश्व बैंकले नेपाललाई ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। यो करिब ८ अर्ब ७० करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ। नेपाललाई खोप खरिदका लागि सहुलियत ऋण दिने प्रस्तावलाई छिट्टै बोर्डमा प्रस्तुत गर्न लागिएको छ। यो रकमले नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको ७२ प्रतिशत...
काठमाण्डौ । नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान आउँदो बुधबारदेखि सुरु हुने भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा माघ १४ गतेबाट कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने जानकारी गराएका हुन्। खोप अभियानको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने मन्त्री त्रिपाठीले बताए। पहिलो...
काठमाण्डौ । भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोनाविरुद्धको खोप नेपाल आइपुगेको छ। भारतले हिजो बुधबार नेपाललाई १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार एयर इन्डियाको विमानबाट भारतले खोप नेपाल पठाएको हो। अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोपको भारतीय संस्करण ‘कोभिसिल्ड’ केहीबेरअघि मात्रै...